पुरानालाई भन्दा नयाँलाई महत्त्व : पार्टी फेरिँदा लाभ, व्यवसायीलाई दलको चिट्ठा
घोराही उपमहानगरपालिकामा शिक्षण पेसा गरिरहेकी सरिता देवकोटा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट नगरप्रमुखको उम्मेदवार बनेकी छिन् । उनी मनोनयन गर्नुभन्दा केही दिन अघिसम्म नेपाली कांग्रेस समर्थित थिइन् । सिद्धरत्ननाथ माध्यामिक विद्यालयमा प्लस टुको शिक्षिका देवकोटा पार्टी परिवर्तन गरेर मेयर उम्मेदवार भएकी हुन् ।
बंगलाचुली गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसका पूर्व सभापति भेषराज खत्री त्यही गाउँपालिकामा अहिले एमालेको तर्फबाट पालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् । अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा काँग्रेसले पनि उनलाई पालिका अध्यक्षको टिकट दिएको थियो । पछि टिकट खोसिएपछि काग्रेससँग रुष्ट हुँदै आएका खत्री नेकपा एमालेमा प्रवेश गरेर पालिकाको अध्यक्ष उम्मेदवार बनेका हुन् ।
बंगलाचुलीमै गठबन्धनको तर्फबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका भक्त जिसी उम्मेदवारी दर्ता गर्नुभन्दा पहिले पालिकाको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख हुन् । अधिकृतको जागिरबाट राजीनामा दिएर उनी अहिले नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट पालिकाको उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेका छन् ।
राजपुर गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट अध्यक्षमा उम्मेदवार बनेका शरद बुढाथोकी व्यवसायी हुन् । राजनीतिमा आस्था भएर पार्टीगत रूपमा नेतृत्व गरिरहेका बुढाथोकी पछिल्लो पटक कांग्रेसले पालिका अध्यक्षमा टिकट दिएर उम्मेदवार बनाएको छ ।
नेपाली कांग्रेसले शान्तिनगर गाउँपालिकामा पनि युवा व्यवसायीलाई उम्मेदवार बनाएको छ । २०७४ सालसम्म राप्रपाको क्षेत्रीय अध्यक्ष रहेका प्रमोद बस्नेत क्षेत्रीय अध्यक्ष कांग्रेस प्रवेश गरेका थिए । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनभन्दा पहिला काँग्रेस प्रवेश गरेका काठ व्यवसायी बस्नेत अहिले पालिका अध्यक्षका उम्मेदवार बनेका छन् ।
राजपुर गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रबाट उपाध्यक्षको उम्मेदवार बनेकी पुष्पा यादव व्यवसायी घरानाकी व्यक्ति हुन् । उनका श्रीमान् गनिएका व्यवसायी मानिन्छन् । दंगीशरण गाउँपालिकामा नेपाली काँग्रेसबाट अध्यक्षमा उम्मेदवारी दिएका शुम्भु गिरी पनि व्यवसायी हुन् । निर्माण व्यवसायी गिरी ७३ सालसम्ममा शिक्षण पेसामा थिए । उनी कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य दीपक गिरीका काका समेत हुन् ।
दाङका दशवटै स्थानीय तहमा राजनीतिक दलहरूले उम्मेदवार बनाउँदा पार्टीमा लामो समयदेखि कार्यरत रहेकाभन्दा पनि नयाँ प्रवासी र व्यवसायीक क्षेत्रका व्यक्तिहरूलाई महत्त्व दिएको देखिन्छ । पुराना, त्यागी, पार्टीमा लगनशील रूपमा राजनीतिमा लागेकाभन्दा पनि नयाँ र धनाढ्य व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्ने प्राथमिकतामा परेपछि निर्वाचनमा पैसाको महत्त्वको विषयमा बहस सुरु भएको छ । चुनावमा लाग्ने खर्च र त्यसको व्यवस्थापनका लागि व्यावसायिक नेताहरू छनौटमा परेको चर्चा हुन थालेको छ ।
खुम्चिँदो समावेशी अवस्था
संविधानले अनिवार्य व्यवस्थापन गरेकोबाहेक अन्य अवस्थामा राजनीतिक दलहरूले समावेशी सिद्धान्तलाई ध्यान दिएको देखिँदैन । एकल रूपमा चुनावी प्रतिस्पर्धामा रहेका राजनीतिक दलहरूले सबै तहमा तोकेअनुसारको सहभागिता गराएका छन् । तर, गठबन्धन भएका स्थानीय तहका प्रमुख उपप्रमुखमा भने महिला सहभागिता शून्य जस्तै छ ।
दाङका तीन स्थानीय तहमा गठबन्धन गरेर ४ दल चुनावी अभियानमा छन् । ती पालिकामा महिला सहभागिता छैन । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट मेयरमा काँग्रेसका गेहेन्द्र गिरी र उपमेयरमा एकीकृत समाजवादीका जोगबहादुर राना उम्मेदवार बनेका छन् । एमालेले उपमेयरको उम्मेदवार महिलालाई बनाएको छ । राप्रपाले चाहिँ महिलालाई मेयरको उम्मेदवार बनाएको छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकामा गठबन्धनको तर्फबाट माओवादी केन्द्रका हेमराज शर्मा मेयर र काँग्रेसका भूप बहादुर डाँगी उपमेयरका उम्मेदवार छन् । यहाँ पनि एमालेले उपमेयर महिलालाई दिएको छ भने राप्रपा नेपालले मेयर महिलालाई उठाएको छ । त्यस्तै बंगलाचुली गाउँपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट दुवै पदमा पुरुष उम्मेदवार रहेका छन् ।
जिल्लाभरी ठूला दलले कमै मात्र महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएका छन् । नेपाली काँग्रेसले राप्ती गाउँपालिका अध्यक्षमा महिलालाई उम्मेदवार बनाएको छ भने पुरुषलाई उपाध्यक्ष बनाएको छ । एमालेले जिल्लाका कुनै पनि स्थानीय तहमा महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छैन । यता काँग्रेसले चाहिँ एक र राप्रपाले दुई पालिकामा महिलालाई प्रमुखको उम्मेदवार बनाएको छ ।
स्थानीय तहको निर्वाचन आयो । विभिन्न राजनीतिक दलका नेता/कार्यकर्ता उम्मेदवारसहित गाउँ–गाउँ पुगे, घर–घर पुगे । तपाईंका लागि हामी, हाम्रा लागि तपाई भन्दै जनताका हात, काँध समेत समाए । विभिन्न चुनावी एजेन्डासहित गाउँ–गाउँ पसेका राजनीतिक दलका नेताहरू स्थानीय तहको चुनाव सकिएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि एकपटक फर्किएर गाउँ पसेनन् ।
अहिले जनता हाम्राभन्दा राम्रा र विकासप्रेमी नेताको पक्षमा छन् । घोराहीका १८ का स्थानीय जोगराज चौधरीले हावादारीभन्दा पुरा हुने एजेण्डा ल्याउने र जनताको भावना बुझ्ने नेतालाई भोट दिइने बताए । ‘म कुन पार्टीको मान्छे हुँभन्दा पनि मैले मेरो भावना बुझ्ने को छ भनेर हेर्ने हो’,उनले भने, ‘चिनेजानेकै उम्मेदवारहरू हामीलाई मत दिनुहोला भन्दै आउँछन्, मुखै अगाडी म दिन्न भन्न त भएन । जिताएर पठाएपछि हामीलाई कसले के गर्‍यो ? अबको चुनावमा हामीले पनि जानेका छौँ ।’
चुनावमा मात्र ठूला ठूला सपना दुखाएर भोट माग्ने अनि जितेपछि फर्किएर नहेर्ने गरेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिका–१० निवासी सुनिता विकले बताइन् । ‘चुनावका बेला भने राती ८/१० बजेसम्म पनि घरदैलो गर्दै हिँड्ने नेताहरू अरुबेला किन आउँदैनन्?’, उनले भनिन्, ‘भोट माग्न मात्र आउने अरुबेला किन नआउने, अरुबेला जनता नचाहिने व्यक्ति अहिले किन मत माग्दै गाउँ पस्नु ? हामी मतदानमा मात्रै चाहिने हो ?’ उनले यसपटकको निर्वाचनमा दुख बुझ्नेलाई भोट दिने पनि बताइन् ।
घोराही उपमहानगरपालिका–९ निवासी बेदुराम वाग्लेको भनाई पनि उस्तै छ । चुनावको समय जतिसुकै ठुला सपना देखाए पनि जिते पनि जनताको आवश्यकताका आधारमा नभई आफ्नो अनुकूल विकासका योजनाहरू ल्याउने गरेको वाग्लेको आरोप छ । तुलसीपुरकै लक्ष्मी बोहराले आफैले जिताएर पठाएका जनप्रतिनिधिले पालिका, वडामा पुगेपछि जनतालाई नचिन्ने, जनमैत्री बन्न नसकेको अनुभव सुनाइन् ।
सानो कामको लागि पनि पटक–पटक पालिका धाउनुपर्ने, वडा धाउनुपर्ने समस्या झेल्दै आएको उनले बताइन् । कयौँपटक काम लिएर जाँदा ‘अहिले होइन, पछि, आज हुँदैन भोलि,’ भन्दै फर्किने गरेको अनुभव सुनाउँदै उनले भनिन्, ‘उहाँहरूले चुनावमा भोट माग्दा मात्रै हो ठिक्क पार्ने, जितेर गइसकेपछि आफ्नै मतदाता चिन्नुहुन्न, उहाँहरूको मात्रै काम उहाँहरूको मात्रै महत्त्वपूर्ण समय हो जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ ।’
जहाँ गठबन्धनका उम्मेदवारलाई चुनौती, त्यहाँ भोट माग्दै देउवा सत्ता गठबन्धनका शीर्ष नेताको अपिल : गठबन्धनको बलमा मुलकको विकास र लोकतन्त्रको जगेर्ना सम्भव